Daryeelka Caafimaadka ee Gobolka Stockholm - 1177
Sjukvårdsrådgivning - somaliska
Sjukvårdsrådgivning - somaliskaThe content concerns Stockholms län
Marka adiga ama qof kamid ah reerka, uu xanuusado, daryeelka caafimaadku marwalba waa mid agtaada aad ka helaysid. Närakuterna, tusaale ahaan, waxay la tacaamusha dhaawacyada iyo xanuunada kuwaasoo hore ugu baahday booqasho lagu tago waaxda caafimaadka ee Shilalka iyo Xaaladaha Degdegga ah ee isbitaalka. Laakiin waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo helo daryeelka caafimaadka. Halkan, waxaad ka akhriyi kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka caafimaad eed heli karto iyo halka aad ka heli karto caawimo.
Daryeelka aad u baahantahay waxa uu ku xidhan yahay khatarta dhaawaca ku gaadhay ama xanuunka ku haya. Mararka qaar, waxa laga yaabaa inaad u baahato daryeel caafimaad iyo daawaynta dhaawacyada iyo xanuunada khatarta ah. Mararka qaar, waxaad ku baxnaanin kartaa naftaada guriga kadib markaad ka hesho talo inaad is-daryeesho ah kalkaaliso/ye caafimaad. Waxa jira meelo kala duwan kuwaasoo ku siin kara daryeel caafimaad. Dhammaan xarumaha caafimaadku waxa jooga shaqaale caafimaad oo takhasus leh.
Haddii aanad garanayn nooca daryeelka caafimaad eed u baahan tahay, fadlan garaac lambarka 1177. Haddii ay tahay xaalad degdeg ah ood u baahan tahay gargaar degdeg ah, fadlan garaac 112.
Talooyin caafimaad ka hel 1177 Vårdguiden
Waxa aad garaaci kartaa 1177 waxaanad la hadli kartaa kalkaaliso, taasoo awood u leh inay ku siiso talo caafimaad oo ku saabsan xanuunada iyo caafimaadka. Mararka qaar, kalkaalisadu waxa laga yaaba inay kuu sheegto inaad daawayn karto xaaladaddaada adigu. Kalkaalisadu waxay awood u leedahay inay kaa caawiso inaad hesho daryeelka caafimaadka ee aad u baahan tahay. Waxaad ka akhriyi kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku qoran luuqadda Swedish-ka halkan.
Hadii aad dagantahay magaalada Stockhol iyo Gowalka aad ku hadashid Afsomali. Soo wac telefonka 08-12313090 malmah shaqada 0800.-17:00 . waa helee tala bixin cafimaad waxaane ka helee kalkaaliso caafimaad iyo turjubaan Afkaaga hooyo kugu cawiyo bilaa lacag la aan dadka dagan gowalka Stockholm.
Vårdcentralen waa xarunta daryeelka caafimaadka ee kuugu dhow marka aad u baahato inaad la kulanto dhakhtar ama kalkaaliso. Degmada Stockholm gudaheeda, waxa jira in ka badan 200 vårdcentraler oo shaqaale caafimaad oo takhasus ku leh cudurada guud ay joogaan.
Waad tagi karto vårdcentraler haddii aad, tusaale ahaan, yeelato:
xummad aad u sarraysa
finanka maqaarka ama infakshanka maqaarka
Furan: Isniinta – Jimcaha 8gh -5gd.
Husläkarjouren waa vårdcentral kaasoo furan fiidkii iyo maalmaha dhammaadka usbuuca. Halkan, waxa aad ka heli kartaa daryeel caafimaad ka hor inta aan la furin vårdcentral deegaankaaga. Waxa jira 13 husläkarjourer, waana lagugu soo dhawaynayaa inaad soo booqato midkastoo kamid ah. Husläkarjourerna waxa la dhigi karaa carruurta da’doodu ka wayn tahay 6 bilood.
Furan: Isniinta–Jimcaha 5gd–10gd, Sabtida–Axadda 8gh–10gd
Booqashada guryaha ee dhakhaatiirta heeganka ah (Jourläkarbilar)
Jourläkarbilarna waxay ay u shaqeeyan fiidka, habeenada iyo usbuucyada dhammaadkooda kuwa u baahan daryeelka degdegga ah laakiin dhib ka waajaha inay tagaan xarun caafimaad. Garaac 1177 si aad ula hadasho kalkaaliso, taasoo go’aamin doonta inaad u baahan tahay dhakhtar heegan ah oo kugu soo booqda guriga.
BUMM – xarumaha caafimaadka ee carruurta
Xarumaha caafimaadka ee carruurta iyo dadka da’doodu yar tahay waxa la yidhaahdaa BUMM. Halkan, waxa jooga dhakhaatiir ku takhasustay cudurada carruurta iyo kalkaalisooyinka carruurta. Carruurta da’doodu u dhaxayso 0-1 jir waxa arki kara dhakhtarka carruurta isla maalinta loo sameeyo ballanta. Waxa jira 40 xarumood oo BUMM ah degmada.
Furan: Isniinta – Jimcaha 8gh -5gd
Närakuten waxa loogu talogalay dhaawacyada iyo xanuunada u baahan daryeelka degdegga ah. Waxa aad heli kartaa gaadiidka ambalaaska oo kuu qaadi kara närakuten, ama adiga ayaa is keeni kara. Halkan, waxa aad ka heli kartaa daryeel in badan dhaawacyada iyo xanuunada hore loogu daaweeyay waaxda shilalka iyo gargaarka degdegga ah ee isbitaalka.
Waxa aad tagi kartaa närakuten haddii adiga ama ilmahaaga, tusaale ahaan, uu yeesho:
falgal xassaasiyadeed oo daran
dhaawacyo khatar ah
Haddii aad u malaynayso inaad ka jabtay gacan ama lug.
Haddii aad u malaynayso inaad xinjiraw dhiigga ah ku yeelatay lugta.
Dhammaan närakuter waxay leedahay:
Qalabka Raajada iyo shaybaadhada tijaabooyinka.
Shaqaale khaas ah oo u tababaran kuwaasoo awood u leh inay daryeelaan carruurta, dadka waawayn iyo dadka waayeelka ah.
Sannadkii 2018, 10 närakuter cusub ayaa laga furay degmada Stockholm.
Närakuterna waxa uu aqbalaa carruurta da’doodu ay ka bilaabanto 0 jir.
Furan: maalinkasta 8gh–10gd
(linki fiidyaw: https://www.youtube.com/watch?v=uNb2N0a1pG0&feature=youtu.be )
Waaxaha gargaarka degdegga ah ee isbitaalka (akutmottagning)
Akutmottagningar isbitaalada waxa loogu talogalay dadka waawayn ee ay ku dhacaan dhaawacyo ama xanuuno aad khatar u ah. Akutmottagningen waxa uu furan yahay 24 saacadoodba.
Waad tagi kartaa akutmottagningen haddii aad, tusaale ahaan, yeelato:
dhibaatooyin dhinaca neefsiga ah
dhaawacyo madaxa ah
Akutmottagningen marka la jooga, dadka xanuunka ugu halista badan hayo ayaa la siiya ahmiyadda koowaad. Waxa laga yaabaa inaad sugto woxooga haddii xaaladdaadu aanay aad khatar u ahayn. Mararka qaar, waxa laga yaaba in laguu diro xarun caafimaad oo kale haddii aad ka heli karto daryeel caafimaad oo ka fiican.
Waaxaha shilalka iyo xaaladaha degdegga ah ee ku yaal Degmada Stockholm
Markasta garaac 112 haddii aad u aragto in xaaladdu nafta halis galinayso.
Qolka gargaarka degdegga ah (barnakut) ee isbitaalka
Barnakuterna isbitaalada waxaa loogu talogalay carruurta iyo dadka yaryar ee da’doodu u dhaxayso 0-17 jir, kuwaas oo qaba xanuun khatar ah una baahan daryeel degdeg ah.
Carruurtu waxa la gayn karaa barnakuten haddii, tusaale ahaan, ay yeeshaan:
Barnakuter ka ku yaala Degmada Stockholm
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset ku yaal Södermalm
Astrid Lindgrens barnsjukhus ku yaal Solna
Astrid Lindgrens barnsjukhus ku yaal Huddinge
Wac 1177 kahor intaanad tagin barnakut.
Kharashaadka daryeelka caafimaadka degdegga ah iyo daryeelka lagama maarmaanka ah
Soo booqdayaasha ka imanaya dalalka Nordic
Haddii aad ku nooshahay Finland, Denmark, Norway ama Iceland, waxad u baahan tahay inaad tusto warqaddaada aqoonsi iyo cinwaanka gurigaaga. Waxaad bixinaysaa daryeelka degdegga ah iyo ka lagama maarmaanka ah kharashaad la mid ah inta ay bixiyaan dadka deggan ee ka diiwaangashan Degmada Stockhom, kuwaasoo ah:
Carruurta da’doodu u dhaxayso 0-17 jir: waa lacag la’aan, marka laga reebo barnakuterna (qolka gargaarka degdegga ah ee carruurta) halkaas oo khidmaddu tahay SEK 120.
Dadka waawayn ee da’doodu u dhaxayso 18 – 84 jir: Vårdcentral, Husläkarjour (Xarun caafimaad/dhakhtarka guud) ama Närakut (xarunta daryeelka degdegga ah) - SEK 200. Akutmottagning (Gargaarka degdegga ah, E.R.) - SEK 400. Xarunta cudurada maskaxda - SEK 350.
Dadka ka waawayn 85 jir: waa lacag la’aan
Soo booqdayaasha ka imanaya dalalka ku yaala EU/EEA ama Switzerland
Haddii aad haysato kaadh ama caddayn EU ah, waxaad bixinaysaa daryeelka degdegga ah iyo ka lagama maarmaanka ah kharashaad la mid ah inta ay bixiyaan dadka deggan ee ka diiwaangashan Degmada Stockhom, eeg kor.
Haddii aanad haysan kaadh EU ah, waxa aad bixinaysaa qiimaha buuxa ee daryeelkaaga adigu. Booqashada dhakhtarka aad ku booqanayso waaxda gargaarka degdegga ah ee isbitaal waxa uu qiimihiisu ku kacayaa inta u dhaxaysa 2000 iyo 3400 SEK. Booqashada dhakhtar cudurada guud eed ku booqanayso vårdcentral, husläkarjour ama närakut wuxuu qiimihiisu ku kacayaa 1800 SEK. Arrimaha qaar, waxad dib u heli kartaan lacagtii aad bixisay adigoo ka helaaya sanduuqa caymiska ee dalkaaga hooyo.
Soo booqdayaasha ka imanaya Algeria, Australia, Quebec ama Israel
Haddii aad haysato baasaboor ansax ah, waxaad bixinaysaa daryeelka degdegga ah lacag la mid ah inta ay bixiyaan dadka deggan ee ka diiwaangashan Degmada Stockhom, eeg kor.
Soo booqdayaasha ka imanaya dalalka kale
Haddii aad tahay booqde ka imanaya dalalka ka baxsan EU ama dalka heshiiska waxqabadeedka kula jira, waxa aad bixinaysa dhammaan kharashaadka daryeelka caafimaadka haddii aad u baahato gargaar degdeg ah. Dalka heshiiska kula jira dalka Sweden waa dalka la leh heshiis wada shaqayn ah.